Izindaba - Kuhlanganiswe nesimo samanje samabhizinisi, kufanele sikwenze isinyathelo ngesinyathelo nangokuzimisela
Kuhlanganiswe nesimo samanje samabhizinisi, kufanele sikwenze igxathu negxathu futhi ngenkuthalo
Ngo-Ephreli 16, izingubo zePinyang zathola i-oda lezingcezu ezingama-3000, ezathunyelwa ngempumelelo ngomhlaka 29. “Inani laleli qoqo lama-oda lincane kakhulu, futhi lidinga imibala eyisikhombisa. Kuthatha amahora ayi-12 ngombala owodwa ukudaya nezinsuku ezintathu ngemibala eyisikhombisa. Futhi idinga ukuqeda izinqubo ezahlukahlukene njengokuluka nokuphrinta. Ekugcineni, ingalethwa ngezinsuku eziyi-13, okukhombisa ukuguquguquka nokushesha kokukhiqizwa kwebhizinisi.
“Ngaphandle kokuguqulwa kwamabhizinisi nokucabanga nge-Intanethi, lezi zinto azinakwenziwa. Ukucabanga nge-inthanethi kudinga ukusebenzisana ukuze kusebenze umqondo wokulethwa kwezinsuku eziyi-7 kunqubo ngayinye. Ama-loop amancane avaliwe enza i-loop enkulu evaliwe, ehlanganiswe ekukhiqizeni okuguquguqukayo. Ukukhiqizwa okuguqukayo, njengocezu lukafulawa, kungaxojwa noma ngabe i-oda likhulu kangakanani.
Ukuvumelana nezimo akubonakali kuphela kumqondo wenguquko yenqubo yokukhiqiza, kepha futhi nasemqondweni wokuphathwa kwamabhizinisi. U-70% womsebenzi kumabhizinisi wezingubo kufanele ube yizicucu, futhi abasebenzi kumele bazimisele ukwenza ama-oda amakhulu. Ngakho-ke, ukukhiqizwa okuguquguqukayo kunesidingo esiphakeme kakhulu ekuphathweni futhi kufanele kulungiselelwe igxathu negxathu esikhathini esifushane. Ukukhiqizwa kwezingubo kuseyimboni efuna abasebenzi abaningi. Isibonelo, imishini yokuphakela othomathikhi ku-workshop yokudaya ithuthukisa inqubo ngokunemba nekhwalithi yomkhiqizo. Kodwa-ke, kwezinye izixhumanisi zokukhiqiza, akunakwenzeka ukuqeda ngokuphelele abasebenzi. Akunakugwenywa futhi kudingekile ukuthi i-Intanethi yezimboni ithuthuke kuze kube manje. Kodwa-ke, ngenxa yezimboni ezahlukahlukene kanye namazinga ahlukene wokungena, kuyadingeka ukuhlanganisa isimo samanje samabhizinisi ukukwenza igxathu negxathu nangokuzimisela.